ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေ တဲ့ နေဆန်းရဲ့ ကြားနေ ဆုတောင်း စာ – Shwe Yoe
ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေ တဲ့ နေဆန်းရဲ့ ကြားနေ ဆုတောင်း စာ
ဆန်းကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံထားရချိန်တောင်မှ . ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ …အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ်… အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းက ဘယ်ဘက်ကိုမှ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်လာခြင်းမရှိတာကြောင့်
… နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက နေဆန်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ရတဲ့အထိ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းက ပရိသတ်များအပေါ်မထိမဲ့မြင်ရေးသားချက်တွေကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့
နေဆန်းတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်တောင်းပန်စာ ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ နေဆန်းတစ်ယောက်ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပျောက်ကွယ်နေပြီး Instagram မှာပဲ ပျော်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ‌တော့ နေဆန်းက သူတော်ကောင်းတွေမို့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ
စောင့်ရှောက်ပေးပါဘုရားဆိုပြီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ နေဆန်းရေးသားထားတဲ့အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက ကြားကနေ တည့်တည့်လေး သေချာထိုင်ထားနော်. ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မြန်မာဆယ်လီရပ်ကွက် ပရိသတ်ကြီးလည်း
နေဆန်းရဲ့ဆုတောင်းစာလေးက ဘယ်သူတွေဘက်ကို ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ရေးပေးသွားခဲ့ကြပါအုံးနော်…
ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် နာမည်ကြီး လူကြိုက်များတဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အသက်ရှူကျပ်ကာ အောက်ဆီဂျင်ပေးနေရတဲ့ စိန်သီး ကို စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အားပေးစကားတွေပြောကြားလိုက် တဲ့ ငြိမ်းချမ်း
မြင်သူတိုင်း အားကျမက်မောလောက်စရာ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို အလန်းစားလေးလှုပ်ခါပြထားတဲ့ ခြူးလေးရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး